Induction Brazing HAVC Zvikwepa zvine Yakakwira Frequency Brazing Heater
musha / Applications / Induction Brazing / Induction Brazing HAVC Zvikwepa
Categories: Induction Brazing, induction brazing machine Tags: Brazing, kusimbisa HVAC, brazing HVAC pombi, mhangura bhandi, mhangura HVAC brazing, pombi dzemhangura dzichisunga, HVAC, HVAC yekushisa hita, HVAC indasitiri, Induction Brazing HVAC Zvikwepa, induction hvac kusungira, Induction HVAC yekushisa hita, Induction HVAC hita
Induction Brazing HVAC Zvikwepa
Refrigeration pombi inogara yakashongedzwa sezvo brazing ichiita yakasimba kwazvo isingabvu-isina kubatana iyo inomira yakakwira uye yakadzika tembiricha uye kumanikidza. Kana uchigadzira firiji pombi zvakanakisa kushandisa solder iyo ine sirivheri mukati mayo sesirivha inoganhurana nemhangura uye inogadzira rakanakisa kudonhedza isina kusimba kubatana (capillary kukwezva).
HLQ Induction inyanzvi pakuronga yakagadziriswa induction kudziya mhinduro kweye brazing ye compressor zvikamu, kudziyisa zvinhu uye kupisa vagoveri.
Mhepo inogadzirisa ine zvikamu zvinoverengeka zvakasungwa. Zvinhu zvakajairika ndezvemhangura nealuminium:
Aluminium zvikamu, semuenzaniso evaporator uye condenser kubatana (tube-to-tube, tube-to-block, tube-to-tank)
Tube-ku-fittings pane iyo condenser unit
Tube-ku-fittings pane iyo evaporator unit
Tube-ku-fittings pane iyo compressor
Tube-kune-mavharuvhu mukuparadzira masisitimu
Induction Brazing yakafanana nekutengesa kunze kwekushisa kuri pamusoro pe800 degreesF.
Zvemhangura, iyo brazing komputa inowanzo shandiswa inowanzodaidzwa kunzi sil-phos sekuonekwa kune kuruboshwe.
Kune mhando dzinoverengeka dzechikamu ichi.
15% Phosphorus / Mhangura / Sirivheri chiwanikwa ndeimwe mhando inoshandisa 15% yesirivheri uye ndiyo yakajairwa matekiniki ebasa kuita kugadzirisa firiji michina. 5% Phosphorus / Mhangura / Sirivheri chiwanikwa chimwe chigadzirwa chakachipa uye vamwe vanoti chinoshanda zvakanaka pakugadzirisa. . Izvo hazvishande pamwe ne15%.
Iko kune zvakare Phosphorus / Copper Alloy isina sirivheri iyo ini yandinoona kuti haina basa zvakanyanya mukugadzirisa.
Mhangura Brazing yeiyo HVAC Indasitiri
Yakawanda mhangura machubhu sirivheri yakashongedzwa neMSI Automation's proprietary induction brazing tekinorojiInduction kupisa neyakafanira induction yekupisa coil tekinoroji inogona sirivheri braze yakawanda yemhangura chubhu inopera mune imwechete pfuti. Maitiro aya anobvisa kunetesa ruoko torch brazing, inovandudza kusagadzikana uye inoderedza mukana wekudonha kubatana.
Yakabatana brazed pakati pendarira chubhu uye yendarira muviri wapera. Kuchenesa nguva uchishandisa MSI yakakosha induction heat coil iri 1/4 yeyakajairika kutenderera mhangura chubhu coil dhizaini.